भारतमा बिहानैदेखि मदिरा पसलमा एक किलोमिटरको लाइन ! - नेपालबहस
भारतमा बिहानैदेखि मदिरा पसलमा एक किलोमिटरको लाइन !
| १५:३२:४५ मा प्रकाशित
२२ बैशाख, एजेन्सी । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागी भारतमा लकडाउन खुकुलो पारिएकाे छ । भारत सरकारले जारी लकडाउनलाई केही खुकुलाे पारेसँगै साेमबारदेखि मदिरा पसल खोल्न दिने निर्णयले मदिरा पसलमा मानिसको लामो लाइन लागेकाे समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।
सोमबार राजधानी सहर दिल्लीमा रहेको देशबन्धु गुप्ता सडकमा रहेको एक मदिरा पसलमा मदिरा खरिद गर्न आउनेको लाइन एक किलोमिटरभन्दा लामो रहेको भारतीय समाचार संस्था अमर उज्लेयालाले जनाएकाे छ ।
भारतले सोमबारदेखि मुलुकमा कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ को जोखिमको आधारमा छुट्याइएको ‘रेड’, ‘अरेन्ज’ र ‘ग्रिन’ जोनहरुमा मदिरा पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यसरी पसल खोल्दा ग्राहकबीच कम्तीमा ६ फिटको भौतिक दूरी भने कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । एएनआईका अनुसार दिल्लीका साथै अन्य सहरमा पनि मदिरा किन्ने मानिसको भीड बढेको छ । मानिसहरुले सरकारले तोकेको भौतिक दूरीको नियम पनि मानेका छैनन् । भीड नियन्त्रणको लागि केही स्थानमा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको छ ।
दिल्लीको झील चोक क्षेत्रको एक मदिरा पसल मानिसहरुको भीड थेग्न नसकेपछि प्रहरीले बन्द गराएको छ । दिल्लीका विभिन्न स्थानमा रहेका एक सय ५० मदिरा पसल सोमबारदेखि खुलेका हुन् । त्यस्तै कर्नाटक, छत्तिसगढलगायत विभिन्न राज्यमा पनि मदिरा पसल खुलेसँगै बिहानैदेखि मानिसहरु लाइनमा बसेका थिए ।
राष्ट्रहित बिपरित एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने सभामुखको अडान ५ दिन पहिले
महिलालाई इच्छाविपरीत वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने पक्राउ ५ दिन पहिले
मूर्तिसहितको शोभायात्रा माडीका लागि प्रस्थान ३ दिन पहिले
एसएस राजामौलीको आरआरआरले कमायाे रिलिज अघि नै ९ सय करोड ३ हप्ता पहिले
अमेरिकी व्यापार नीति उसकै लागि अहितकर २ वर्ष पहिले
चितवनका सात पालिकाको नौ अर्ब बजेट विनियोजन १० महिना पहिले
म्यान्मार सैनिक कू : देशभित्र मात्रै हैन, विदेशमा पनि प्रदर्शन ३ हप्ता पहिले
त्रसित भएर खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु सञ्चित नगर्नुस १ वर्ष पहिले